Xildhibaan Cabdifitaax “Waa in dadweynaha laga qayb geliyaa qabyo tirka Dastuurka, lana soo daadajiyaa dhameestirkiisa” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdifitaax “Waa in dadweynaha laga qayb geliyaa qabyo tirka Dastuurka, lana soo daadajiyaa dhameestirkiisa”
February 14, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim ,oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Qabyo tirka Dastuurka Soomaaliya oo si gaabis ah ku socda. Waxa uu ku taliyay in la dadejiyo dhameestirka Dastuurka Soomaaliya oo ku xiran xal u helidda Siyaasadda Soomaaliya maadaama Dastuurka qeexayo Awoodaha iyo kala sareynta hogaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdifitaax ayaa sheegay in Miisaaniyadda Qaranka ay ku jirto qoondo u gaar ah Dhameestirka Dastuurka Soomaaliya waxa uu ku taliyay Wasaaradda Maaliyadda iyo Gudiyada ku leg leh Dastuurka ay laba-laabaan dadaalkooda maadaama uu sii dhamanayo mudadii loo qabtay Dhameestirka Dastuurka.
“Dalku waa in uu yeeshaa Dastuur Qaran aan qabyo ahayn oo saxan, markaas waxaa hagaagayo Siyaasadda iyo hogaanka Dowladda” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya. “Dastuurka waa hishiis Bulsho waana in laga tala galiyaa Bulshadda, waxaa soo baxaya Dastuur hufan oo dhameestiran” ayuu yiri Cabdilfitaax Qaasim.
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim, ayaa sheegay in Shirarka Dastuurka looga hadlo lagu soo koobay hoteelo iyo goobo kale oo gaar ah oo aysan dadku u hei karin in ay ogaadaan waxa socda. Xildhibaanka ayaa ugu baaqay Wasiirka Dastuurka Soomaaliya iyo Guddiyada arimahaan qaabilsan in ay fursad siiyaan Shacabka Soomaaliyeed.
“Dastuurka waa in ay maamulaan shacabka Soomaaliyeed, waa in ay fursad u helaan, Waxaan ku talinayaa in la dhameeyo dastuurkaan lana soo saaro Dastuur aan qodobadiisa Mugdi ku jirin” ayuu hadalkiisa raaciyay Cabdifitaax Qaasim.